के राम पत्नीपरायण थिएनन् ? - AP Khabar
२१ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:३४
भाद्र , २१ : किशोरकालमा मर्यादा र अनुशासनको पाठ सिकाउँदा मेरी आमा सीता र रामको सम्बन्धलाई कथा हालेर सुनाउनुहुन्थ्यो । १२ वर्षसम्म रामसँग वनवास बसेकी गर्भिणी सीताको चरित्रमाथि लोकले गरेको टिप्पणी सुनेर रामले उनलाई त्यागेको कथा सुन्दा आङ जिरिंग हुन्थ्यो । कथालाई आमा यसरी टुंगोमा पु-याउनुहुन्थ्यो– धोबीको कुरा सुनेर रामले गर्भवती सीता त्यागिदिए । अनि आमाको गला अवरुद्ध हुन्थ्यो र मेरो बाल मस्तिष्कमा कहाली लाग्थ्यो ।म असिनपसिन हुन्थेँ । मेरो मस्तिष्कमा रामको बिम्ब एकाएक निर्दयी दानवका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो । अहिले वाल्मीकि रामायणको मूलग्रन्थ पढिरहेकी छु । राम र सीताको अमर प्रेमकथा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तरिका गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा म अहिले पुगेकी छु । आफ्ना सहस्र प्रतिकूलताका बाबजुद मर्यादाप्रति राम कति संवेदनशील थिए र सीताको प्रेममा कति समर्पित थिए भन्ने वाल्मीकि रामायणको अध्ययनले प्रस्ट पार्छ ।
अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा थिए राम । यसकारण अयोध्या राज्य स्वतः उनैको हातमा आउँथ्यो । सबैतिर हारेको पात्रका रूपमा चिनिएका राम कसैले उठाउनै नसकेको शिवधनु (पिनाक) भाँच्ने पराक्रमी व्यक्ति हुन् । पराक्रमी र आज्ञाकारी दुवै गुण एउटै व्यक्ति राममा थियो । चाहन्थे भने उनी पराक्रम गरेर सत्ता हडप्न सक्थे । तर, आफ्नी कान्छी आमा कैकेयीसँग बाबु दशरथले वचन हारेपछि बाबुको प्रतिज्ञा पूरा गरिदिन उनी १२ वर्ष वनवास जान्छन् । पराक्रमको शक्तिलाई आज्ञाकारिताको विवेकले नियन्त्रण गरेका थिए उनले ।कान्छी आमाको प्रेममा परेर बाबुले भाइको हातमा सत्ता सुम्पिन लागेका थिए । यो सरासर गलत थियो । स्वयं भाइ भरत र सारा अयोध्यावासी उनको पक्षमा थिए । तर, उनले यसो गरेनन् । किनकि ज्ञानी राम आफू सत्तामा बस्ने कुराले अयोध्यामा किचलो नहोस् र जनतामा नैराश्य नआओस् भन्ने चाहन्थे । बरु उनी भाइ लक्ष्मणलाई साथमा लिएर वनवास गए ।
सीता जनकपुरका राजा जनककी राजकुमारी थिइन् । उनको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसँग भएको थियो । तर, रामकी सौतेनी आमाको जाल र घर–झगडाले उनी रामकै साथमा १२ वर्ष वनवासमा बस्छिन् । त्यहीबीच रावणबाट सीताको अपहरण हुन्छ । र, राजपरिवारको सुखसयल त्यागेकी सीताको जीवनका दिव्य १२ वर्ष जंगलमै बित्छन् ।रामायणका भित्री कथा एकै भए पनि बाहिरका व्याख्या फरक पाइन्छन् । वाल्मीकि रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, कम्ब रामायण, तमिल रामायण र भानुभक्तीय रामायणका कथालाई आधार बनाउँदा सीता र राम पूज्य हुनुको कारण एउटै देखिन्छन् । राजा जनक र माता सुनयनाकी जेठी छोरी थिइन्– सीता ।आध्यात्मिक तथा ज्ञानी राजा जनककी शिष्य मात्र होइन, सीता सुन्दरी र बुद्धिमती, युद्धकौशल भएकी योद्धा पनि थिइन् । पूजाकोठामा राखिएको, शूरवीरले पनि उचाल्न नसक्ने शिवधनु सीताले उचालेर अन्त सारेको घटनापछि जनकले उनको युद्धकौशल र शक्तिबारे जानेका थिए । जनकले शिवधनुमा ताँदो चढाउन सक्नेलाई छोरी दिने वाचा गरेका थिए ।
शिवधनु (पिनाक) राजा दशरथका छोरा रामले उचालेनन् मात्र, ताँदो चढाएर भाँची नै दिए । र, उनै रामसँग धुमधामसाथ सीताको विवाह भयो (बालकाण्ड, त्रिसप्ततितमः सर्ग पेज २०९ )। त्यही दिन मंसिर महिनामा पर्ने विवाह पञ्चमी आज पनि उसैगरी अयोध्याबाट जन्ती ल्याएर जनकपुरमा मनाउने चलन छ । त्यस दिन नेपाल भारत र विश्वभरका हिन्दू सभ्यताका भक्तालुहरूको घुइँचो हुन्छ । धैर्य, संयम र विवेककी प्रतिमूर्ति सहनशीला सीताको त्याग, परिश्रम र सच्चरित्रताकै कारण उनलाई भगवतीका रूपमा पुजिन्छ ।माण्डवी, उर्मिला र श्रुतकीर्ति सीताका बहिनी थिए । उनीहरूको विवाह पनि क्रमशः रामका भाइ भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नसँग भएको थियो । तर, उनीहरूको कहीँ यसरी चर्चा छैन । राम र सीता भने आदर्श चरित्रका कारण पूज्य पात्र बने । किन ? त्यसका लागि उनीहरूको जीवनलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ । सीता र रामको विवाह त भयो, तर सौतेनी आमा कैकेयीसँग आफ्नो छोरो भरतलाई राज्य दिने पहिल्यै गरेको बाबु दशरथको वाचाका कारण राम वनवास निस्कन्छन् ।
निःशस्त्र, निर्बल अवस्थामा महिनौँ लगाएर सीताको खोजमा राम अहिलेको दक्षिण भारत त्रिकूटगिरि पुग्छन् । राम यति प्रिय र सहयोगी हुन्छन्, उनले केही दिन त्यहाँ बस्दा त्यहाँका सबै तमिलहरूलाई आफ्नो बनाउँछन् । अनि तमिललाई उनकै पक्षमा लड्ने बनाउँछन् । समुद्रको किनारमा बसेर हनुमान, जाम्बवान, अंगद, सुग्रिभ नामका तमिललाई साथी बनाई तिनैलाई सेना बनाएर सीता फर्काउने योजना बुन्छन् (सुन्दरकाण्ड, प्रथमः सर्गः११–१२ पे.) । त्यति लामो बाटो, समुद्रमा पुल नै बनाई, सुनको देश लङ्का जलाएर सीतालाई सकुशल त्याउने तागत प्रेमीमा बाहेक अरूसँग हुन सक्छ ?राम राजा थिए । उनले चाहेका भए त्यसवेला अरू दर्जन श्रीमती ल्याउन सक्थे । तर, कर्तव्यपरायण राम वनवास रहँदा जनताप्रतिको जिम्मेवारी शून्य थियो र सीताको प्रेममा चुर्लुम्म थिए । रामले अयोध्यादेखि श्रीलङ्कासम्मको हजारौँहजार किलोमिटरको दूरी हिँडेर समुद्र किनारामा बस्ने तमिलहरूलाई आफ्नो बनाए । झुक्किनुहुँदैन, हनुमान र उनका सेना तिनै दक्षिण भारतका तमिलहरू थिए । तिनै सेनालाई लिएर लङ्का जलाएर सीतालाई लिएर फर्कनु सीताको प्रेमबाहेक अरू केही थिएन । उनी सीतालाई कति प्रेम गर्थे भन्ने कुरा वाल्मीकि रामायणको आरण्यकाण्डमा लामो व्याख्या गरिएको छ(आरण्यकाण्ड, सप्तपच्ञाश सर्गदेखि चतुःगाष्टितम सर्गसम्म यसैको व्याख्या गरिएको छ) ।